ပြောင်းဖူးနှင့်ဂျုံကဲ့သို့ကြီးမားသောကောက်ပဲသီးနှံများသည်လက်ချောင်းများနှင့်သူ့ခြေထောက်များကိုရေနှင့်သဲများစီးဆင်းသည့်အခါလူတစ် ဦး သည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်။. လူအများစုမေ့လျော့။ မရသည့်အရာမှာလျင်မြန်စွာစီးဆင်းနေသောစပါးသည်လူကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်စေနိုင်သည်, အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစပါးကိုအမှိုက်ပုံသို့မဟုတ်စပါးကိုလှည်း၌ရှိသကဲ့သို့အောက်ပိုင်းမှယိုစီးမှုအထူးသဖြင့်အခါ.
တစ်ချိန်ကလူတစ် ဦး သည်စပါးပုံသို့ဆွဲချခံရသည်, ထိုလူကိုဆွဲထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်. စပါးကျီ၌သာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရသော်လည်း၊, သူတို့ကိုစပါးမှထုတ်ယူရန်ရာနှင့်ချီသောပေါင်များကိုဆွဲထုတ်ရန်လိုအပ်သည်, တစ် ဦး တည်းလူတစ် ဦး ထက်အခြားလူတစ် ဦး သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့အကြီးအကျယ်အစေ့မှကယ်တင်ရန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ထက်အများကြီးပိုမှုန့်. ဘောဇဉ်အများအပြားလက်မအောက်မှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ထည့်လေ့မရှိသောဘောဇဉ်သည်ဖိအားပေးမှုကဲ့သို့ပြုမူသည်. လူတစ် ဦး ထွက်ရှူသကဲ့သို့, စပါးတစ်ချိန်ကလူတစ် ဦး ၏တိုးချဲ့ရင်ဘတ်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သောအာကာသဖြည့်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့အတွက်တွန်း. ပြီးတာနဲ့စပါးအရပျ၌တည်ရှိ၏, လူသည်နောက်တဖန်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်မရှိခြင်းကြောင့်ထိုသူသည်ကွယ်လွန်သွားလိမ့်မည်. ဤသည်အတော်လေးလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်. ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်.
လူတစ်ယောက်သင်္ဂြိုဟ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့အစေ့ထဲမှာပိတ်မိနေ. လူ
1. ပုံ၏အောက်ခြေမှရွေ့လျားနေသောသို့မဟုတ်စီးဆင်းနေသောmassiveရာမကောက်ပဲသီးနှံပေါ်တွင်ရပ်တည်သည်။ စီးဆင်းသောစပါးသည်လျင်မြန်စွာစီးနေသောသဲများကဲ့သို့ပြုမူပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းလူကိုမြှုပ်နှံသည်။.
2. ပေါင်းကူးအခြေအနေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ရပ်တည်သည်. စပါးကိုအတူတကွစည်းသောအခါပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်, အစိုဓာတ်ကြောင့်, အရာက unloaded အဖြစ်စပါးကိုအောက်မှာတစ် ဦး အချည်းနှီးသောအာကာသ creats. လူတစ် ဦး သည်တံတားပေါ်မှစပါးသို့မဟုတ်အောက်တွင်ရပ်လျှင်, ပြိုကျနိုင်တယ်, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်, လူကိုမြှုပ်
3. ဘင်၏ဘေးထွက်အပေါ်စုဆောင်းထားသောစပါးပုံဘေးမှာရပ်. စပါးပုံသည်လူကိုမမျှော်လင့်ဘဲသို့မဟုတ်၎င်းဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါလူကိုထိမိနိုင်သည်.
စပါးရိတ်နေသောစပါးသည်လူတစ် ဦး ၏အလေးချိန်ကိုမစီးဆင်းစေဘဲ၎င်းသည်စီးဆင်းသည့်အခါgrရာမကောက်ပဲသီးနှံများထဲသို့ကျလိမ့်မည်.
သုတေသနမှတက်ပြသခဲ့သည် 400 ပေါင်. တွန်းအားပေးသောစွမ်းအားသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုခါးအတွင်းမှထုတ်ယူရန်လိုအပ်သည်. ၎င်းသည်ကျောရိုးကော်လံကိုအစဉ်အမြဲပျက်စီးစေရန်လုံလောက်သောအင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်.